Liverpool oo beddelka Georginio Wijnaldum ka dhex aragta Koox ka dhisan dalka Spain – Gool FM
(Liverpool) 27 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa inay beddelka Georginio Wijnaldum oo ka tagay ay ka dhex aragto naadi ka dhisan dalka Spain.
Liverpool ayaa bartilmaameedkeeda sare ka dhigatay suuqa xagaagan xiddiga naadiga Atletico Madrid ee Saul Niguez, kaasoo ay doonayso inuu u galo booskii uu banneeyey Wijnaldum.
Reds ayaa suuqa aad uga baadi-goobeysa beddelka ciyaaryahan Georginio Wijnaldum, kaasoo beeca xorta ah uga tagay dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore.
Saul ayaa u soo muuqda bartilmaameedka ugu sarreeya ee qaadan kara booska Wijnaldum khadka dhexe ee Liverpool, isagoo horyaalka La Liga kula guuleystay Atletico xilli ciyaareedkii hore.
Liverpool ayaa kula dagaalameysa kooxaha Manchester United iyo Chelsea sidii ay ku heli lahaayeen adeeggiisa, iyadoo laacibka reer Spain uu dheeri ku yahay garoonka Wanda Metropolitano oo ay Atletico iska fasixi karto.
Sida ay warinayso Jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain, Man United ayaa loo arkaa inay tahay halka uu u dhaqaaqayo, laakiin Liverpool ayaa xiriir la sameysay wakiilada 26-sano jirkaan si uu ugu soo dhaqaaqo Garoonka Anfield.
Wargayska Isbaanishka ah ayaa sheegaya in dalab dhan 43 milyan oo gini ay ku filnaan karto Atletico inay ku qanacdo inay iibiso laacibkaan.